एका बिहानै माता मनोकामना माइले सबैको रक्षा गरुन,हेर्नुहोस राशिफल : कार्तिक २० गते बिहीबार तपाइको आजको भाग्य कस्तो रहला ? पुरा पढ्नुहोस
November 4, 2020 adminLeaveaComment on एका बिहानै माता मनोकामना माइले सबैको रक्षा गरुन,हेर्नुहोस राशिफल : कार्तिक २० गते बिहीबार तपाइको आजको भाग्य कस्तो रहला ? पुरा पढ्नुहोस
ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी । खबर पत्रीका बाट
सार्है दुखद खबर: २५ वर्षसम्म आफैंले काम गरेको अस्पतालमा आइसिुयु बेड नपाएर मृ’त्यु,,,,हेर्नुहोस् ।
मैले रा’जीनामा दिने भन्ने कुरा बेकारको होः प्रधानमन्त्री ओली
पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस भोलि,असोज १९ गते सोमबारको राशिफल ।